Funda ngokuSwita urhwebo ngenzuzo enkulu! - Funda nge-2 kaJanuwari ngo-2022
Funda ngesiKhokelo se-2 soRhwebo ngo-2021 kuRhwebo loSwing!
Ukurhweba nge-Swing kuya kuba ngokubalaseleyo njengendlela yotyalo-mali kubarhwebi abathengisayo. Kungenxa yokuba, ngokungafaniyo nokuthengisa kwemini, inika ubhetyebhetye ngakumbi ngelixa ibonelela ngamathuba aneleyo okuthengisa ukuze avelise imbuyekezo engaguqukiyo.
Kwinqanaba layo, ukurhweba ngokurhweba sisicwangciso esibona urhwebo luhlala luvulekile ixesha elingaphezulu kosuku. Isikhundla sinokugcinwa sivulekile iintsuku ezimbalwa okanye iiveki. Kwiimeko ezinqabileyo, banokuyibamba ivuleke kangangeenyanga ezi-2-3 ukuba urhwebo luhlala lunenzuzo. Kananjalo, kugxilwe kurhwebo lwe-swing kukuthatha inzuzo encinci kwixesha elifutshane, kodwa kusekude kunosuku.
Umbono osisiseko kukuba abathengisi abaninzi bakholelwa ukuba utshintsho kwiasethi ludinga iintsuku okanye iiveki ezininzi ukuba kubekho utshintsho kwixabiso elaneleyo lokwenza inzuzo efanelekileyo. Kananjalo, umntu unokuthi abarhwebi abaninzi bazithatha njengabarhwebi abajikelezayo.
Kwesi sikhokelo sokugqibela sokurhweba ngokuthengisa, sikubonisa yonke into eyaziwayo. Ukuphela kokufunda isikhokelo sethu ngokupheleleyo, uya kuba nakho ukwenza isigqibo esinolwazi malunga nokuba ungakulungeli na ukurhweba kulungile kuwe!
Usebenza njani ukuThengisa ukuRhweba?
Abarhwebi be-Swing bajonge ukubamba nakuphi na "ukuguquka" okanye iintshukumo kwixabiso leasethi kwintengiso. Ufuna ukutshixa inzuzo yakho ngaphambi kokuba kwenzeke utshintsho olulandelayo, ngakumbi ngaphambi kokuba imarike ibuyele umva ukuze izuze inzuzo yakho.
Abarhwebi beSwing basebenzise izixhobo ezinje ngohlalutyo lobuchwephesha ukufumana amathuba kwiiswings. Njengoko ujonge ukuphambuka okuncinci, unokwenza urhwebo olunje kwiimarike ezihamba-hambayo okanye ezimbi.
Ukuba uyazibuza ukuba ngaba ukurhweba ngokurhweba kunokuba lukhetho olufanelekileyo kuwe, nantsi into efanelekileyo kunye neempawu ezingalunganga.
Ukurhweba ngokurhweba kufuna ixesha elincinci xa kuthelekiswa nokuthengisa kwemini
Unokubamba utshintsho olubalulekileyo kumaxabiso asethi
Unokuseka izicwangciso zakho kwidatha evela kuhlalutyo lobuchwephesha
Umngcipheko wokuphulukana nesikhundla sakho ukuba ubambe ixesha elide.
Iimarike zinokujika nangaliphi na ixesha ezikhokelela kwilahleko
Ungaphoswa ziindlela ezenzeka kumaxesha ongezelelweyo
Indlela yokufikelela kwiShishini lokuThengisa
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, injongo yomrhwebi wokujika kukuqokelela inzuzo ngexesha elifutshane. Ngokuchasene notyalo-mali lwexesha elide, ujonge ukubheja inzuzo encinci. Ngamanye amaxesha, uyakwenza kuphela i-5% -10%.
Inzuzo encinci enjalo inokungabonakali njengemivuzo ebalulekileyo kumntu oqhelekileyo. Nangona kunjalo, xa ujonga ixesha elifutshane lokufumana le nzuzo, iya kuphakama ibe sisixa esikhulu kunye nokuqonda okufanelekileyo malunga nendlela ezisebenza ngayo iimarike.
Ngokomndilili, ixesha lokurhweba ngokujikeleza liphakathi kweentsuku ezi-2 ukuya kwezi-10. Kunqabile ukuba inabe iiveki. Kulula kwezi ntsuku zimbalwa, unokwenza iincwadana ezincinci zikhokelele kwinzuzo enkulu ngokubanzi.
Umahluko phakathi kokuThengisa ukuRhweba kunye noRhwebo loSuku
Umahluko ophambili phakathi kwezi ntlobo zimbini zorhwebo ulele ngexesha lokubamba lorhwebo. Ekuthengiseni kwemini, ukhetha ukuthatha ukuvala urhwebo kwangolo suku ulivulayo ngalo. Ukurhweba ngokurhweba, kwelinye icala, kubandakanya ukugcina isikhundla sivulekile ubuncinci ixesha leeyure ezingama-24.
Abarhwebi be-Swing banokujonga kwakhona kwiindawo zabo zeasethi ngamanye amaxesha kwaye bathathe amanyathelo ngokufanelekileyo. Ngapha koko, awunyanzelekanga ukuba ulandele ngokusondeleyo i-asethi, njengoko isikhundla sinokubanjwa kangangeentsuku.
Akunjalo ngokuthengisa kwemini. Njengabathengisi bemini banokugcina urhwebo luvulekile ngemizuzu nje embalwa. Ngale nto ithethwayo, njengomrhwebi oguqukayo, kuhlala kukho umngcipheko wokuba izinto zinokutshintsha ngobusuku obubodwa zibe ngcono okanye zibe mbi.
Uhlobo lweeaseti zoRhwebo loSwinga
Isigqibo sokuqala esikhulu ekurhwebeni urhwebo kukukhetha uhlobo lweeasethi ofuna ukuzithengisa. Kukho iimarike ezahlukeneyo zezemali kunye nezixhobo zemali ezikhoyo kubathengisi be-swing. Ngokujonga nje, umntu unokungena kwintengiso yezabelo ezizodwa, imali, izinto zorhwebo, kunye nokufakwa kwiidigital.
Abahwebi banokukhetha i-domain ngokusekelwe kwiminqweno yabo okanye kuxhomekeke kubungakanani bemali ekufuneka bangene kuyo.
Kwicala eliqaqambileyo, kukho uluhlu olubanzi lwezixhobo zemali onokukhetha kuzo - esixoxa ngazo ngokweenkcukacha ezingezantsi.
Iimpahla ezizodwa ngokungathandabuzekiyo zezona mpahla zidumileyo zokurhweba ngokurhweba. Ezi zizabelo ngokwenkampani nganye. Nangona kunjalo, ukurhweba ngezi zabelo kuza nomngcipheko wesiganeko esinye esichaphazela ixabiso lesitokhwe.
Umzekelo, ukuba unezabelo kwistokhwe sebhanki ebonakalayo, ukuphuculwa kweendaba ngolwaphulo-mthetho kunokubangela ukuba ixabiso lezabelo zalo lithengiswe kwangoko. Ngokwenyani, uhlala usengozini kulomngcipheko xa urhweba ngestokhwe ngasinye. Kwelinye icala, banokufumana ixabiso ngokukhawuleza emva kokuphehlelelwa kwemveliso entsha.
Izalathiso zizabelo zeenkampani ezizodwa ezidityanisiweyo. Ukurhweba kwii-indices kuya kukuvumela uthathe ithuba lokutshintsha kweemarike kungekuphela kwecandelo elinye kodwa kuluhlu olubanzi lweenkampani. Kwangelo xesha, ngokufanayo kwii-equities, utshintsho kwinkampani enye lunokuchaphazela isalathiso sonke ngokunjalo.
Ii-ETFs zithathwa njengezona zikhethiweyo zeasethi yokurhweba ngokurhweba. Zimele uluhlu lweeasethi kwaye ziyafumaneka kumacandelo aliqela.
Umrhwebi unokukhetha ETF Naluphi na udidi lotyalo-mali ukuba banolwazi nge-asethi ethile. Ukurhweba nge-ETF kusebenza ngeendlela ezifanayo zotyalo-mali kwisitokhwe ngasinye, ngaphandle kokuba uza kuthengisa iqela leempahla ezahlukeneyo.
I-Forex okanye utshintshiselwano lwangaphandle lelinye icandelo eliphambili labarhwebi be-swing. Ngelixa urhwebo lwezezimali, ujonge ukubona ukwanda kwemali okanye ukwehla kwexabiso elinxulumene nelinye. Inkqubo ye- kwimarike Forex inokuba bhetyebhetye kwaye ithengiswa ikakhulu ngabathengisi abanamava.
Ukurhweba kwempahla kuhlala kuzanywa ngabarhwebi be-swing abaqeqeshiweyo. Ezi zizinto ezinzima ezihlelwe ngokwamandla, isinyithi, kunye nemveliso yezolimo. Ngokungafaniyo nezinye iiasethi, iimarike zorhwebo zihlala zivulekile kwaye zisebenza imini yonke, kwaye urhwebo luyaqhubeka. Oko kuza nomngcipheko omkhulu kubarhwebi.
Ukurhweba kwii-cryptocurrensets kuya kusiba ngakumbi kwaye kuthandwa ngakumbi phakathi kwabarhwebi be-swing. Ukuze uzuze apha, awudingi kuphela ubungcali kurhwebo lwe-swing kodwa kunye nokusebenza kwee-cryptocurrensets. Ukuguquguquka kweemali ze-imali yedatha kunomdla kakhulu kwi-swing izicwangciso zorhwebo.
Ukukhetha iAsethi elungileyo
Kwabaqalayo, ukhetho oluninzi olukhoyo lunokubonakala lunomtsalane kwaye lube nzima ngexesha elinye. Ukuba awunalo ulwazi lobuchwephesha kwii-asethi ezithile, inyathelo lakho lokuqala kukuchonga ukuba yeyiphi imarike oza kusebenza kuyo Akukhuthazwa ukuba uzame ukurhweba ngaphezulu kwe-asethi enye ngexesha, ngakumbi ukuba umtsha ebaleni.
Abarhwebi beSwing banezixhobo ezahlukeneyo ezikhoyo ukwenza ukhetho olunolwazi ngokubhekisele kurhwebo lwabo. Kuxhomekeka kwinto oyikhethayo, unakho kwaye kufanelekile ukuxhamla kwizixhobo ezikhoyo onazo. Xa uqala, injongo yakho kukufunda ukubanjiswa kwempahla enye kunye nendlela yokuqikelela ukuhamba kwayo.
Njengoko usenza inkqubela phambili, unokufuna ukuzama ukurhweba kwamanye amacandelo. Nangona kunjalo, uya kuba nombono ongcono kwizinto ozikhethayo xa unamava.
Iziseko zoRhwebo loSwinga
Ukurhweba ngokurhweba kusebenza ngokufana nayo nayiphi na indawo yokutyala. Umahluko ophambili, njengoko sele sigubungele, kukwisithuba sexesha lezikhundla. Nanga amanye amanqaku ekufuneka uwazi ukuze uqalise kuthengiso lokuthengisa.
Ukuhamba ixesha elide vs. Ukuhamba ngokufutshane
Ukuba ufunde naliphi na inqaku elinxulumene nokuthengisa, kunzima ukuphoswa ngala magama. Kwinqanaba lokuthengisa, zimbini izikhundla. Umtyalomali unokuhamba ixesha elide okanye elifutshane.
Ngokuhamba ixesha elide, uthenga i-asethi kwaye unethemba lokuba ixabiso layo liza kunyuka ngaphambi kokuba uyithengise.
Ngokuhamba kancinci, ucinga ukuba ixabiso liza kwehla, ke uthengisa iiasethi ukuzithenga ngexabiso eliphantsi.
Abatyalomali abanamaxesha banokudibanisa zombini ezi ndlela zokwenza eyona asethi iphambili.
Umzekelo oMde woRhwebo
Masithi uqikelela kwixabiso lemarike lezabelo ze-ABC ezihamba phambili.
Utyala imali kwizabelo ezili-100 ze-ABC ngexabiso lentengiso le- $ 20
Ixabiso lilonke lolu shishino liyi- $ 2000.
Ukuba ixabiso lezabelo ze-ABC linyuka nge-2.5%, uya kuba nakho ukuthengisa izabelo nge-20.5 yeedola, eya kuthi ikunike ixabiso lokuphuma le- $ 2050.
Inzuzo yakho ye- $ 50 sisiphumo sokuhamba ixesha elide kwi-ABC. Ukuba ukhetha ukuhamba ixesha elide, inzuzo enokubakho inokunyuka ngokungenammiselo. Ukuba ixabiso leasethi alonyukanga njengoko ubulindele, uya kuba ujongene nelahleko kurhwebo olukhankanyiweyo.
Umzekelo, ukuba ixabiso lezabelo ze-ABC bezinokuhla ziye kwi-19.5 yeedola, uya kuthi ke ushiywe ilahleko ye- $ 50. Abarhwebi beSwing bafuna ukuthengisa iiasethi ngaphambi kokuba oko kuncipha kwenzeke kwintengiso.
Umzekelo omfutshane woRhwebo
Ukuba izabelo ze-ABC zijongeka njenge-bearish, emva koko ubeka iodolo yokuthengisa.
Uvula urhwebo ukuze uthengise izabelo ezili-100 ze-ABC kwi- $ 30 ngesabelo ngasinye, kwinani elipheleleyo le- $ 3000
Ireyithi ye-ABC yehla nge-16.6% kwiintsuku ezimbalwa
Oku kuthatha ixabiso lesabelo le-ABC ukuya kwi- $ 25
Ubeka i-oda yokuthenga kwaye uthenge kwakhona izabelo ezili-100 kwi- $ 2500
Inzuzo yakho yi- $ 500
Ubungakanani benzuzo oyenzayo ngokungahambi kakuhle kuxhomekeke kubungakanani bento ehla kwiasethi kwindawo yentengiso evulekileyo.
Ayizizo zonke i-broker ezikhuthaza abatyali mali ukuba bazibandakanye nokuthengisa okufutshane. Ukuba ufuna ukuxhamla kwisicwangciso esifutshane sokuthengisa, ukubheja kwakho okuhle usebenzisa iqonga lokurhweba elinikezela ngeeCFD.
Ukurhweba ngokujikeleza iiCFD
Xa urhweba nee-CFDs okanye iiContrakti-zoNomehluko, ngoyena urhweba ngomda. Umxholo kukuba awusisixhobo esisisiseko semali (nokuba yinto yorhwebo, isitokhwe, okanye i-forex). Endaweni yokuba urhwebe ngesixhobo esilanda ii-asethi ezifanelekileyo. Kananjalo, uya kugqiba ekubeni uziva unyanzelekile (thenga iodolo) okanye i-bearish (i-bearish) ngokubhekisele kumathemba ayo.
Ngokubalulekileyo, ukurhweba ngee-CFD yindlela elungileyo yokuhamba kancinci ngelixa ujika urhwebo. Njengoko ungathengi okanye uthengise iiasethi ezibonakalayo, inzuzo yakho iya kwandiswa ukuba urhweba ngomda.
Ixesha lokurhweba ngeSwing
Ukurhweba ngokurhweba kufanelekile ukuba kube zizikhundla zexesha elifutshane. Nangona kunjalo, ngexesha elifutshane, ixesha linokubakho naphi na phakathi kweentsuku ezimbalwa ukuya kwiiveki ezimbalwa. Isicwangciso esiliqili kukuqokelela inzuzo njengoko ixabiso lisonyuka (okanye lincipha xa kufutshane).
Abanye abathengisi bakhetha ukutshixa ngaphakathi kwiinzuzo ezincinci, ngelixa abanye bevumela i-asethi iqhubeke ukuze bandise inzuzo yabo. Nangona kunjalo, ixesha elide ulibambe, ubeka emngciphekweni ezinye izinto ezichaphazela amaxabiso ukukuzisa ilahleko.
Iindlela zokurhweba ngeSwing
Ukurhweba nge-Swing yenye yeendlela ezintsonkothileyo zoku yorhwebo ntengiso. Kungabonakala kulula ngokwaneleyo ukuthengisa iiasethi kwakamsinya nje ukuba ixabiso lonyuke. Nangona kunjalo, icandelo elinzima kukukhetha isixhobo esifanelekileyo semali oza kutyala kuso.
Kuthatha ixesha, ukuzibophelela, kunye nomonde ukuze uzifundise ubugcisa bokurhweba ngokurhweba. Kuya kufuneka ufunde izicwangciso ezikhoyo kunye nokuzama ukuphuhlisa iindlela zakho ezizodwa. Kukho inani leendlela zolawulo lomngcipheko ezikhoyo ukunciphisa ilahleko yakho.
Ngaphandle komzabalazo weqhinga kukungazinzi ngokweemvakalelo onokuthi uhambe xa ujika urhwebo. Kungabonakala ngathi utyala imali kuphela kwixesha elifutshane, kodwa abahwebi abahamba betyala imali eninzi kwiiasethi ezininzi ukwenza inzuzo enkulu. Emva koko, ukuba ujongene nelahleko, oko kunokuba kwicala lezinto.
Abarhwebi kufuneka bajolise ekuphepheni iziphumo zorhwebo olunye ukuchaphazela utyalomali lwakho olulandelayo. Kulapho izixhobo ezinje ngohlalutyo lobuchwephesha zisebenza khona. Oku kukuvumela ukuba uchonge iipateni kwaye wenze ngokweeasethi zakho ngokufanelekileyo. Iindawo ezininzi zokurhweba zikunika ukufikelela kwezi zixhobo. Siza kuxoxa (ngokokubona kwethu) abarhwebi abaphambili kwi-Intanethi ukurhweba ngokurhweba kamva kwesi sikhokelo.
Uhlobo lweeOdolo kuRhwebo loSwinga
Kude kube ngoku, besigubungele ezona ndawo zimbini zibaluleke kakhulu kuyo nayiphi na intengiso- iodolo yokuthenga kunye nomyalelo wokuthengisa. Kutyalo mali lwesintu, ezi ndlela zimbini zoku-odola zinokwanela njengoko amancinane Utshintsho kwimarike aluyi kuchaphazela iithagethi zenzuzo zexesha elide zomrhwebi. Nangona kunjalo, xa kuziwa kurhwebo lwexesha elifutshane, akunakwenzeka ukuba ushiye i-odolo ivulekile ngaphandle koluvo lokuba ujonge ukufezekisa. Ngokwenza njalo, oku kuya kubhekiswa njengokuthengisa ngokungakhathali.
Kananjalo, wonke umrhwebi ufuna isicwangciso sokuphuma, okanye kungenjalo banokulinda ngokungapheliyo inzuzo ukuba inyuke okanye ilahleko inciphise. Oku kubaluleke ngakumbi, kuba abathengisi be-swing baya kuthi baphathe ukuthengisa okuninzi ngexesha elifutshane.
Stop-Ilahleko Order ukuze Limit Ilahleko
Njengoko igama libonisa, lo myalelo unceda ekunciphiseni ilahleko kurhwebo. Kungumyalelo owubekayo wokuvala urhwebo lwakho nje ukuba ixabiso leasethi lifikelele kwixabiso elithile. Umzekelo, uthenge isitokhwe se-ABC kwi-50 yeedola ngesabelo ngasinye. Emva kwe-oda yakho yokuthenga, ixabiso lesitokhwe liqala ukuncipha.
Kule meko, wawusele ubeke i-odolo yokulahleka kwe- $ 48. Oku kuthetha ukuba, xa izabelo ze-ABC ziqala ukwehla, izitokhwe zakho ziya kuthengiswa xa ifikelela kumanqaku angama-48 eedola. Nokuba iphose kangakanani, uya kuthatha kuphela ilahleko ye- $ 2 ngesabelo ngasinye.
Ngokwesiqhelo, le miyalelo yokuyeka ilahleko ibekwa ngokweziqingatha zeepesenti. Uya kubeka i-stop-loss order ukuba i-asethi ilahlekelwe lixabiso layo ngokuthi, 2% okanye 3%, okanye izinga lokukhetha kwakho.
Kukho imeko enokubakho kwicala eliphantsi koku. Nangona ii-odolo zokuyeka ilahleko ngokungathi zisebenza njengomgaqo-nkqubo weinshurensi, akusoloko kuqinisekiswa ukuba uya kuba nakho ukuyigcina le nto. Iimeko zentengiso zinokungavumeli ukuba intengiso yenzeke ngeli xabiso. Endaweni yokuba abanye abathengisi banike abatyali zimali ixabiso 'lokulahleka' lokumisa. Oku kuyakuqinisekisa ukuba umthengisi uya kuyikhathalela iodolo yakho ngaphandle kwentengiso. Ukuxhamla koku, abatyali mali bayakuhlawuliswa imali eyongezelelweyo.
Imiyalelo yokuThatha iNzuzo kwiNgeniso yokuNgena ngaphakathi
Eyona nto intle njengoko inokubonakala ngathi mayivumele inzuzo yakho inyuke, izikhundla ezivulekileyo zinokungahambi kakuhle kwimizuzwana nje. Kungenxa yoko le nto abarhwebi abanamava beya kujonga ukuvalela ngaphakathi inzuzo yabo. Umahluko kuphela apha kukuba ngelixa ukulahleka kokuyeka ukuzama ukuqinisa umda wokulahleka, ii-odolo zenzuzo zikuvumela ukuba ukhusele inzuzo yakho. Abatyalomali bahlala befika kwixabiso lokuthatha inzuzo emva kokwenza uhlalutyo lobuchwephesha kwimpahla ethile. Iya kubanika uqikelelo lobungakanani bexesha lokunyuka kwe-asethi.
Umzekelo, yithi uhambe ixesha elide kwizabelo ze-ABC kwi- $ 50. Ubeka i-odolo yokuthatha inzuzo kwi-55 yeedola. Ukuba kwaye nini xa ixabiso le-ABC lifikelela kwi-55 yeedola, i-oda yakho yokuthengisa iya kwenziwa. Apha, ujolise kwinzuzo ye-10%. Umyalelo wokwenza inzuzo uza kuqinisekisa ukuba nokuba izabelo ze-ABC ziyehla emva kokufikelela kwi-55 yeedola, umvuzo wakho utshixiwe ngexabiso elifanelekileyo.
Ukuseta iiodolo ezinjalo kuluncedo lomtyalomali. Iya kukuvumela ukuba uthathe inyathelo ubuye umva kwaye ufikelele kukhetho lwakho ngaphambi kokuba uqale urhwebe. Uya kufumana umbono wokulahleka kwakho kunye neenzuzo kurhwebo ngalunye. Ngaphaya koko, ukuseta la maxabiso kuya kubathintela abatyali-mali ekuqikeleleni izigqibo zabo.
Abarhwebi beSwing basebenza ngokuxhaswa kolo lwazi ukuze babeke urhwebo ngaphezulu kwesinye. Ngamanye amaxesha, iiasethi zakho azizukufikelela kwimida ebekiweyo, nokuba yeyiphi. Ukuba oko kuyenzeka, kuxhomekeke kumrhwebi ukuthatha isigqibo sokuba bafuna ukuvala urhwebo okanye hayi. Ekurhwebeni nge-swing, unokuhlala ulinde kancinci ukuba ulinde nayiphi na intshukumo.
Ukunyusa kunye noMda xa kuthengiswa ukuThengisa
Abathengisi be-Swing bafuna ukufikelela kwinkunzi enkulu ukuze babeke urhwebo oluninzi kwisithuba esifutshane. Nanku apho ukuphakama kudlala khona.
Abatyalomali banokuxhomekeka kubungakanani endaweni yokusebenzisa imali yabo kuphela. Umzekelo, masithi umrhwebi uneedola ezingama-500 kuphela kwiakhawunti yakhe, kwaye bafuna i-5000 yeedola ukwenza urhwebo. Banokusebenzisa amandla okufumana i-10x ukufikelela kwi-capital abayifunayo.
Gcina ukhumbula ukuba ukunyusa akukhulisi kuphela i-capital yakho kodwa kunye neenzuzo kunye nelahleko kunye nayo. Amanqanaba ayafumaneka kwiifolokhwe ezininzi. Kuxhomekeke kulawulo, kuyakubakho nemida kumyinge wokufumana onokufumana. Kuya kuxhomekeka kuhlobo lweeasethi othengisa nazo.
Umngcipheko wokuphakama ulele kwinto yokuba xa ujongene nelahleko, iya kuba yi-10x njengakulo mzekelo unikiweyo. Kwabaqalayo, kubalulekile ukuba ubazi ngokupheleleyo ubungozi bokusebenzisa amandla ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa ithuba lokufumana imali eyongezelelweyo.
Imirhumo yeBroker kunye neeKomishini zoRhwebo loThingo
Ukuhweba kwe-Swing kwenzeka ngeqonga lokuthengisa. Namhlanje, uninzi lwezi ntengiso lwenzeka kwi-Intanethi njengoko zibonelela ngokulula nangokufanelekileyo. Nokuba urhweba phi, kukho imirhumo embalwa esemgangathweni ekufuneka uyibhatalele umrhwebi.
The sasaza ichazwa njengumahluko kwizikhundla zokurhweba ze-asethi enye. Ngamanye amagama, ngumahluko phakathi kokuba uthengisa kwaye uthengise kangakanani i-asethi. Abarhwebi banyanzela ukusasazeka kuyo yonke intengiso abayenzayo, ebazisela inzuzo nokuba yeyiphi na indlela yentengiso.
Ukusasazeka ngokubanzi kulula ukuyiqonda ngokweepesenti. Lonke urhwebo olugqibileyo kufuneka lube nenzuzo ubuncinci ngokufanayo nokusasazeka. Kude kube lelo xesha, uya kuhlala kubomvu.
Nanku umzekelo wendlela yokubala ukusasazeka
Yithi uthenge izabelo ze-ABC ngexabiso lokuthenga le- $ 50.00
Izabelo ze-ABC zithengiswa ngexabiso lokuthengisa le- $ 50.50
Ukusasazeka, kule meko, yi-1%,
Ukuze wenze inzuzo kolu rhwebo, kufuneka ixabiso le-ABC likhuphuke ubuncinci nge-1% ukwenza inzuzo emva kokuhlawula ukusasazeka
Kuthelekiswa ne urhwebo usuku, Ukurhweba ngokurhweba ngokubanzi kuluncedo xa kufikwa ekusasazeni. Kwimeko yangaphambili, imida ekujoliswe kuyo incinci kakhulu kunakwiswitshi yokurhweba, ke ukusasazeka kuya kudlala ifuthe elikhulu kumandla akho okwenza inzuzo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ujonge kwiindawo zokurhweba ezibonelela ngokusasazeka ukuze uthathe inzuzo eninzi kangangoko.
Ngelixa ukusasazeka kungumrhumo onyanzelekileyo kuzo zonke iindawo zokurhweba, ayinguye wonke umrhwebi oza kukuhlawulisa ngekhomishini. Ukuba bayayenza, ngumrhumo owuhlawulayo kwintengiselwano nganye oyibeka kumrhwebi.
Ikhomishini nayo ibalwa ngepesenti, kwaye imali yokugqibela iya kusekelwa kwinkunzi othengisa kuyo. Kuya kufuneka uhlawule ikhomishini kuwo omabini amacala orhwebo, oko kuthetha ukuba kuya kubakho ikhomishini yokuthenga kunye nekhomishini yokuthengisa.
Iiplatifomu ezi-5 eziPhezulu zokuThengisa ngo-2021
Ukufumana iqonga elifanelekileyo lokurhweba kubaluleke ngokulinganayo njengokufunda ukwenza urhwebo ngokwalo. Abaqalayo bahlala bedidekile kumakhulu okhetho olukhoyo. Kungenxa yoko le nto kufuneka ulandele iikhrayitheriya, ukujonga ukuba zilawulwa kwaye zibonelela ngemirhumo efanelekileyo.
Indawo yokuthengisa ethembekileyo kufuneka ikunikeze nazo zonke izixhobo eziyimfuneko ukuze usekele izigqibo zakho kuzo. Ukwenza umsebenzi wakho ube lula, apha ngezantsi sidwelisa (ngokwembono yethu) ezona ndawo zintathu zokurhweba zintle ze2021.
Usebenzisa i-AvaTrade, unokutyala kuzo zonke izixhobo zemali esixoxe ngazo kwesi sikhokelo. Uluhlu lwayo lubandakanya isitokhwe, i-forex, ii-indices, i-crypto, iimpahla kunye nee-ETF, kunye nezibophelelo kunye nokukhetha. Iqonga linegama ekudala limile njengendawo yokurhweba kwinqanaba lokuqala. I-AVATrade ilawulwa kumazwekazi onke ngamagunya amaninzi ahloniphekileyo.
Ukurhweba ngokurhweba kufuna into eninzi yokwenza ukuze ufumane ubuchule kunye nokuhambelana. Akukho ndlela yokuthetha ukuba luncedo kangakanani uguquko lokurhweba xa kuthelekiswa nezinye iindlela. Kodwa, luhlobo lwesicwangciso esinokusebenza kakuhle kwabanye abatyali mali. Kuya kuxhomekeka kwiprofayili yakho ethile yotyalo-mali, imali efumanekayo yorhwebo, kwaye okona kubalulekileyo - ukhetho lotyalo mali.
Esi sikhokelo sigubungele iziseko zokurhweba ngokurhweba. Phambi kokuba uqale, kufuneka uqhubeke nokuphanda ukuba zeziphi ezinye iindlela ezikhoyo, kunye neetekhnoloji ekufuneka uzisebenzisile. Njengazo zonke ezinye iindlela zokurhweba, kufuneka ulungele ukwamkela zombini inzuzo kwaye Ilahleko apha endleleni.
Leliphi ixesha eliqhelekileyo lokurhweba ngokurhweba ngokurhweba?
Abathengisi be-Swing bagcina izikhundla zabo zivulekile ixesha leentsuku ezimbalwa ukuya kwiiveki ezimbalwa. Eli xesha lixhomekeke kuhlobo lweeasethi kunye neemeko zentengiso.
Ungazuza malini ngokurhweba ngokuthengisa?
Abarhwebi be-Swing batyale imali ukwenza inzuzo encinci ngexesha elifutshane. Oko kwathethi, ukuba ungafumana malini ngosuku olunye ngokusekwe kwintengiso yabo, inani lotyalo-mali, kunye nendlela iiasethi zabo ezisebenza ngayo kwintengiso.
Kukuthini ukusasazeka kurhwebo lwe-swing?
Ukusasazeka ngumsantsa ophakathi kwebhidi kunye nexabiso lokucela kwesixhobo semali. Ngamanye amaxesha kubalwa njengepesenti, kwaye kwezinye iimeko, kwii 'pips'. Umtyalomali kufuneka enze ipesenti efanayo kwinzuzo ukuze aphule.
Ngubani olawula ukuthengisa kurhwebo?
Oku kuxhomekeke kukhetho lwakho lomrhwebi kwaye apho bathatha isigqibo sokufumana ilayisensi Umzekelo, e-UK le yi-FCA, i-Australia ine-ASIC, kwaye iSipro ine-CySEC. Ngelixa ukhetha iqonga lokurhweba, luxanduva lwakho ukuqinisekisa ukuba indawo ibekwe esweni ngumbutho onelayisensi owaziwayo. Onke amaqonga esiwakhankanyile kweli phepha anelayisensi ngokupheleleyo.
Sisiphi isibonelelo esifumanekayo sokurhweba ngokurhweba?
Imida yokuphakama kurhwebo lwe-swing imiselwe ikakhulu ngumthengisi, kunye nodidi lweeasethi ..
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezinokusetyenziselwa ukufaka kunye nokutsala ingxowa mali kwiindawo zokurhweba?
Ekurhwebeni urhwebo, abatyali mali babambe izikhundla zabo kangangeentsuku okanye iiveki. Ngokwahlukileyo, abathengisi bemini bavula kwaye bavala izikhundla kwangolo suku lunye. Ukuba ufuna ukugcina izikhundla zakho ubusuku bonke, ungakwenza oko ngokuhlawula umrhumo wobusuku njengoko uhlawuliswe liqonga lokurhweba.